WARP, Cloudflare Yemahara VPN Chishandiso Kuuya kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
WARP, Cloudflare yemahara VPN chishandiso chiri kuuya kuLinux, asi kutanga kuWindows uye macOS
pablinux | | Noticias, Linux software
Svondo rapfuura, Linux Torvalds yakaburitsa Linux 5.6 uye imwe yenyaya dzayo dzakatanhamara yaive yekuzvarwa kutsigira WireGuard. Zvakare, munaGunyana, mushure mekunonoka kwenguva refu, Cloudflare yakaburitsa yayo WARP yeIOS uye Android, chishandiso cheVPN chinovimbisa kuita kuti kubatana kweinternet kuve kwakachengeteka. WARP Iri mune yakajairwa uye Plus vhezheni, yechipiri ichibhadharwa uye iyo inopa ese mashandiro pasina zvirambidzo.
WARP yakaziviswa muna Kubvumbi 2019. Cloudflare pakutanga yakanga yaronga kuunza chishandiso chavo kumatafura, asi vakafunga kuenda nhare nekuti zvaive zvakanyanya kunetsa. Muchokwadi, uye sezvatataura, zvakanonoka kunonoka nekuda kwekuoma kwakabatanidzwa. Iye zvino, kambani yatotaura kare kuti kune beta inowanikwa, asi kushamisika! Panguva ino chete yeWindows uye macOS. Iyo Linux vhezheni ichazofanira kumirira zvishoma zvishoma.
WARP: inoshanda uye inokurumidza WireGuard protocol
WARP mutengi we macOS uye Windows inovimba neiyo imwe inokurumidza uye inoshanda Wireguard protocol yekudzivirira kubatana kweInternet uye kudzivirira yako ISP kubva mukuvasora. Zvakare, seWARP mune 1.1.1.1 mobile app, iyo yekutanga sevhisi ichave yemahara paMacOS neWindows..
WARP iVPN yakanyatsogadzirirwa yedu kubatana kwakazvimirira uye kwakachengeteka, panguva imwechete iyo ivo vasingarasikirwe nekubatana kumhanya. Zvirinani senge izvo mushanduro dzeserura uye iwe unongofanirwa kufamba kuburikidza neYeTuve kuti uone akawanda emavhidhiyo mavari ekukurumidza kumhanyisa nemhedzisiro inoshamisa. Sezvatatsanangura, uye ivo vanotsanangura mukati iyi inopinda Pawebhusaiti yepamutemo, WARP yatovepo mune beta fomu yeWindows uye macOS, asi vashandisi veLinux vachazofanira kumirira kuvandudzwa pamapuratifomu maviri aya kuti awedzere mberi.
Kana iwe usiri kuda kumirira kuti uone kuti zvinoshanda sei, unogona kuzviedza mune ayo mavhezheni e Android y iOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WARP, Cloudflare yemahara VPN chishandiso chiri kuuya kuLinux, asi kutanga kuWindows uye macOS
Iyo mibvunzo ku Zoom yakawedzera uye kuwanda
Iyo itsva vhezheni yeNAS system, OpenMediaVault 5, iri pano